Hakan Çalhanoğlu oo Turkiga looga gacan haadinayo & Milan oo ka fiirsanaysa…. – Gool FM
Hakan Çalhanoğlu oo Turkiga looga gacan haadinayo & Milan oo ka fiirsanaysa….
Raage December 2, 2017
(Milano) 02 Dis 2017 – AC Milan ayaa ka baaraan degeyso dalabyo Turkey uga imanaya Hakan Calhanoglu isla bisha soo aaddan ee Jannaayo, sida uu dhigayo Corriere dello Sport.
23-jirkan khadka dhexe ayay Milan xagaagii uun kasoo qaadatay Bayer Leverkusen oo ay faraqa ugu shubtay €22m iyo bareemiyo, wuxuuna ilaa haatan dhaliyay 2 gool, 6 goolna wuu dhiibey 19 kulan oo rasmi ah, taasoo aan tiro xun ahayn, balse bandhiggiisa guud ahaaneed ma aha midkii laga sugayay.
Waxaa intaa dheer in Calhanoglu uu markale ku maqan yahay dhaawac muruqa ah, taasoo dood gelinaysa faya qabkiisa guud, wuxuuna Corriere dello Sport haatan qorayaa inay Milan heshay dhowr dalab oo ka kala yimi naadiyo Turkish ah sida Galatasaray iyo Fenerbahce.
Waxaa la aaminsan yahay in Rossoneri ay laacibka ku fasaxayso qiime dhan €24m oo ah mid u dhow isla tii ay kusoo qaadatay iyadoo fasixi karta isla Jannaayo.
Kooxaha Inter Milan, Atletico Madrid iyo Barcelona oo isku garbinaya gaban Brazilian ah